सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन !
उनले जवाफ दिए, मलाई कुनै समस्या छैन।ूउनले के पनि भने भन्दा मैलै उनको ध्यान तान्नुपर्छ र त्यसो गरेर उनको नजिक हुनुपर्छ। मैले निकै आँट गरेँ । मेलै कल्पना गरेकी थिएँ कि मेरो स्पर्शले परिणाम दिनेछ तर म निराश भएँ। मलाई थाहा थिएन र यसबारे कसलाई सोध्ने ? मलाई एकदमै लाज लाग्यो। त्यसले मलाई सतायो। जसरी महिलाको सुन्दरताबारे पुरूषहरू धारणा बनाउँछन्, मैले मेरा पतिको शरीर हेरेर धारणा बनाउन किन मिल्दैन ? मैले पतिबाट अपेक्षा गर्नु गलत थियो र ? त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि उनी नपुंसक थिए र हाम्रो बिहेभन्दा पहिले डाक्टरले उनी नपुंसक भएको पुष्टि गरिसकेका थिए।
पुनर्जन्म पाएजस्तो मलाई महसुस भयो। म अहिले ४० वर्षकी भएँ र म अझै कुमारी छु। विगतमा मसँग नजिक हुन धेरै पुरूषहरूले प्रयास पनि गरे। उनीहरूले के लख काटे भने शारीरिक सन्तुष्टि नपाएरै मैले आफ्ना पतिलाई छाडेकी हुँ र उनीहरूले मबाट त्यही पाउन खोजे।त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदम गलत र सङ्कीर्ण सोच थियो। म त्यस्ता पुरूषदेखि टाढै बसेँ। उनीहरूमध्ये कसैले मसँग बिहे गर्न चाहेको थिएन र प्रतिबद्ध सम्बन्ध बनाउन चाहेको थिएन। मसँग चाहना, सपना र भावनाहरू छन्। तर मलाई माया गर्ने, मेरो ख्याल गर्ने, मेरा भावनाहरू बुझ्ने र मसँग जीवन बिताउने व्यक्तिसामु मात्रै म यी कुराहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु।